မေလ 2022 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးစတော့အချက်ပြမှုများ- PRO ကဲ့သို့လေ့လာပြီး ကုန်သွယ်မှု။
Beginners များအတွက်အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာ Signals 2022
တစ်ခါတစ်ရံ 'လုပ်ဆောင်မှုအတွက်အစပျိုး' ဟုရည်ညွှန်းသည်၊ စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများသည်အကျိုးအမြတ်ရှိသောကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသောအကြံပြုချက်များကိုပေးသည်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်လျော်သောကုန်သွယ်ရေးတွင်မည်သည့်အမိန့်ကို ၀ ယ်ရမည်ဆိုသည်ကိုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည် - အချက်ပြပေးသူမှပြုလုပ်သောနက်ရှိုင်းသောနည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်အခြေခံသည်။
အဆိုပါရှာဖွေနေ အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများ? သို့ဆိုလျှင် Learn2Trade ၌သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စတော့ခ်အချက်ပြမှုများ၏ အဝင်အထွက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား အနီးစပ်ဆုံးပုံစံဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပုံနှင့် ယနေ့စတင်ရန် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကို ဆွေးနွေးပါသည်။
တစ်ပတ်ကို Stock Signal ၃ ခုရယူပါ
Signals အားလုံးမှာ Entry and Exit Orders တွေပါ
ရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းငွေနှင့်တစ်လလျှင်ပေါင် ၁၅ ပေါင်သာရှိသည်
မင်းရှာနေတယ်ဆိုပါစို့ စတော့အိတ်ချိန်းကြီးများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။NYSE နှင့် NASDAQ ကဲ့သို့သော Disney၊ Amazon၊ Tesla၊ Facebook နှင့် အခြားသော blue-chip ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ ရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်။ သင်သိသည့်အတိုင်း - အခြေခံနှင့် နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုကို ဦးစွာလေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမဟာဗျူဟာနှစ်ခုလုံးသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ယူရန်လိုအပ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ဘဏ္financialာရေးအချက်အလက်အမျိုးမျိုး၊ သမိုင်းနှင့်လက်ရှိစျေးနှုန်းဇယားများနှင့်ညွှန်းကိန်းအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောညွှန်းကိန်းများတွင်နှိုင်းယှဉ်မှုအစွမ်းသတ္တိအညွှန်းကိန်း၊ ပျမ်းမျှ Directional Index, On-Balance-Volume, Stochastic Oscillator, MACD နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
အသစ်အသစ်သောသူများစွာသည် အထက်ဖော်ပြပါအဆင့်မြင့်သုတေသနကိုကျော်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် အမြတ်ငွေအနည်းငယ်မျှသာရှိသော ကုန်သွယ်ဘတ်ဂျက်ကို ထိုးနှက်ရန် မြန်ဆန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဤသို့သော ကိရိယာများမပါဘဲ ကုန်သည်များသည် စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းများနှင့် အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မင်းက အဓိကအားဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တာက မျက်မမြင်ပါ။ စတင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးစတော့အချက်ပြမှုများကို သင်အသုံးမပြုပါက၊
ဤတွင်လေ့လာပါ2ကုန်သွယ်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သည်များအားတသမတ်တည်းအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်နှင့်သူတို့၏အမြင့်ဆုံးအလားအလာကိုကူညီပေးလိုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ငါတို့စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများကိုသင် - ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အသိပေးချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူကုန်သွယ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မယ်။
စတင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးစတော့အချက်ပြမှုများအကြောင်း ဤလမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံး ဆွေးနွေးနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များသည် သင့်အား စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ မည်သည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ လုံးဝလုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်သည့် အချက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Learn2Trade signals များအတွက် သီးသန့်မထားပါ။ ရုံ အရင်ကဆိုရင် အလုပ်များသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများပင်လျှင် ကုန်သွယ်မှုအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာသော ချဉ်းကပ်မှုမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
'စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြအသစ်များ' ၏အမျိုးအစားသို့ကျရောက်သူမည်သူမဆိုအတွက်၎င်းတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြပါ။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများကိုအရောင်းအဝယ်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အရိပ်အမြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Learn2Trade Telegram အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက်၊ သင်သည် တစ်ပတ်လျှင် အချက်ပြမှု3ခုကို စတင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အချက်ပြမှုတစ်ခုစီတွင် အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော အမှာစာအကြံပြုချက်များ၏ စည်းကမ်းချက်များတွင် အရေးကြီးသောအချက်အလက်များပါရှိလိမ့်မည် - ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်၏ အတွင်းကျကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ ရရှိပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင်သည် စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေး အခွင့်အလမ်းများ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းအတွက် ပူပန်နေစရာမလိုတော့ပါ။
သင့်အားရှင်းလင်းသောအကြံဥာဏ်ပေးရန်အောက်ဖော်ပြပါ Learn2Trade stock signal ဥပမာ၏အပြင်အဆင်ကိုကြည့်ပါ။
အမြတ်အစွန်း - $214.00
အကောင်းဆုံးစတော့အချက်ပြမှုများတွင် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်အားလုံး ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတွင် စတော့၏အမည်နှင့် အရှည် သို့မဟုတ် အတိုလုပ်ရန် အကြံပြုသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုများသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်သာ အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် စတော့အချက်ပြမှုသည် Disney တွင်ကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အကြံပြုနေပါက၊ အကြောင်းမှာ များစွာသောသုတေသနပြုပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းရှိကုန်သည်များသည် တန်ဖိုးတိုးလာမည်ကို ကြိုမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလားတူ၊ အချက်ပြမှု တိုသွားပါက၊ ဒေတာအားလုံးသည် စျေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်အရာကိုအကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာ Signal များပါဝင်သည်
Learn2Trade stock signal ၏ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ပတ်သက်သော ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ပေးထားပါသည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသော စတော့ပွဲစားတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုထားသော အမှာစာများတင်ရန် ဤအရာက သင့်အတွက် လုံလောက်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့ အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်ကို နားလည်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အောက်ဖော်ပြပါသည် Learn2Trade စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုကိုလက်ခံရရှိသောအခါသင်တွေ့ကြုံရမည့်အချက်အလက်အချက်အလက်များတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်။
မင်းရဲ့စတော့အချက်ပြမှုမှာ ပထမဆုံးမြင်ရမယ့်အရာက အလားအလာရှိတဲ့ ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းကို ငါတို့မြင်ရတဲ့ ကုမ္ပဏီနာမည်ပါပဲ။ တကယ်တော့ စတော့ရှယ်ယာတွေဟာ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းမှာ နှစ်ရာနဲ့ချီပြီး တက်ကြွစွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့ကြတာပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကဲခတ်သူများ စူးစမ်းရှာဖွေသည့် ကွဲပြားခြားနားသော စျေးကွက်များ အများအပြားရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာအချက်အလက်များသည်များသောအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးဖလှယ်မှုအချို့မှကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာသုံးသပ်သူများကအမေရိကန်နှင့်ယူကေစျေးကွက်များဖြစ်သည့် NYSE, NASDAQ နှင့် London Stock Exchange စတော့ရှယ်ယာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့ရှိသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် Lloyds Banking Group၊ Vodafone၊ Tesco၊ NatWest၊ Rolls Royce Holdings နှင့် အခြားကုမ္ပဏီများ ပါဝင်သည်။ NYSE တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းရှိ ကုန်သည်များ အဓိကအာရုံစိုက်သည့် အတက်ကြွဆုံးစတော့အချို့တွင် Disney၊ Ford Motors နှင့် Johnson & Johnson တို့ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ NASDAQ စတော့သင်္ကေတများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် Tesla၊ Amazon၊ Microsoft၊ PayPal၊ Alphabet နှင့် အခြားအရာများ ပါဝင်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း စတော့အိတ်ချိန်းများတွင် နှစ်ခုစာရင်းများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စတော့သင်္ကေတသည် မည်သည့်လဲလှယ်မှုကို ပစ်မှတ်ထားသင့်သည်ကို ပြောပြပါမည်။ သင်အမြဲမသေချာပါက - ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးထံမှ အကူအညီတောင်းပါ။
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုတစ်ခုစီသည် 'long' သို့မဟုတ် 'short' သွားရန်အကြံပြုချက်တစ်ခုပါလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့စတော့ရှယ်ယာအလိုတော်ယုံကြည်လျှင် တက် တန်ဖိုးမှာ - ငါတို့ရဲ့ signal ကမင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ် ရှည်သွား
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့စတော့ရှယ်ယာအလိုတော်ယုံကြည်လျှင် ကျ စျေးနှုန်း - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ signal ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ် တိုတိုသွားပါ.
Learn2ကုန်သွယ်ရေးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြအကြံပြုပါက ရှည်လျားသော - ဖန်တီးပါ ဝယ်ခြင်း မိမိနှစ်သက်ရာ စတော့ပွဲစားနှင့် မှာယူပါ။
, အကယ်။ Learn2ကုန်သွယ်ရေးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြအကြံပြုလျှင် တိုတောင်းသော - ဖန်တီးပါ ရောင်းချ စတော့ပွဲစားနဲ့ အော်ဒါမှာတယ်။
ဤနေရာတွင်အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာလူတိုင်း၏စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန် - ဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ဆောင်သော စတော့ရှယ်ယာများနှင့် ဆက်နွယ်မှုမရှိဟု မပြောဘဲနေပါသည်။ အဓိက အာရုံစိုက်သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကဲခတ်သူများ အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ သို့မှသာ လုပ်ငန်းအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများသည်အလားအလာရှိသောအနေအထားတစ်ခုစီတွင် 'ကန့်သတ်ချက်အမိန့်' စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြသည်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်စတော့ဈေးကွက်ကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် ၀ င်နိုင်သည်။
ပထမနည်းလမ်းမှာ 'စျေးကွက်အမိန့်' မှတဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤအမိန့်ကိုသင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတွင်အလိုအလျောက်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏အွန်လိုင်းပွဲစားကိုသင်လက်ရှိစတော့စျေးနှုန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းနှင့်သင်၏အမှာစာကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်အလိုရှိသည်၊ လာမည့်အနီးဆုံးစျေးကွက်ပေါက်စျေးအတိုင်းဖြစ်သည်။
ရေတိုကုန်သည်များသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းလိုကြသည်။ ထိုသတိမထားမိသူများအတွက်သင့်အားစျေးနှုန်းအလွန်တိကျသောစျေးနှုန်းဖြင့်စျေးကွက်ထဲ ၀ င်နိုင်စေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောစွန့်စားမှုပမာဏကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများသည်ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနပြုလုပ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးနှုန်း $677.00 ဖြင့် Tesla စတော့များကို အရောင်းအဝယ်လုပ်နေပါသည်။
ငါတို့အဖွဲ့သည် Tesla ကိုဒေါ်လာ ၆၈၂.၀၀ အထိမြင့်တက်ပါက၎င်းသည်ပညာရှိသည်ဟုနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည် ရှည်လျားသွား.
ထို့ကြောင့်၊ $682.00 ကန့်သတ်အမိန့်ကို အချက်ပြသည်။
အမိန့်ကိုအလိုအလျောက်ဤစျေးနှုန်းသက်ရောက်သည်နှင့်ချက်ချင်းဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ တက်စလာသည် ၆၈၂.၀၀ ဒေါ်လာထိမရောက်မချင်း၊ ဤအမှာစာမှာဆိုင်းငံ့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စျေးကွက်ထဲသို့ သင်၏ဝင်ရောက်မှုအကြောင်း အကျယ်တဝင့်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ - အကောင်းဆုံးစတော့အချက်ပြမှုများတွင် ဝယ်/ရောင်းနှင့် မှာယူမှုကန့်သတ်ချက်များ အကြံပြုချက်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထွက်ပေါက်ဗျူဟာရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဤအချက်ကို စိတ်ထဲတွင် ထားပါ၊ ယခု စတော့ အချက်ပြ ကုန်သွယ်မှုမှ သင်၏ စွန့်စား-မနှစ်သက်သော ထွက်ပေါက် အကြောင်း ပြောရန် အချိန်ကျရောက်ပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင်၊ အဓိကပန်းတိုင်မှာ စတော့ဈေးကွက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘဝမှာ အာမခံချက်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မရှိပါဘူး။ သို့သော်၊ ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်သည် သင့်ဆုံးရှုံးမှုများကို အမှန်တကယ် ရပ်တန့်စေမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ရှင်းပြရန်, အွန်လိုင်းကုန်သွယ်နယ်ပယ်တွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးသောအမိန့်ဖြင့်သင်အနည်းဆုံးမည်မျှရရှိသည်သို့မဟုတ်မည်မျှဆုံးရှုံးသည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည် - သင်၏ရာထူးနေရာကိုသင်ရွေးချယ်သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကအလိုအလျောက်မပိတ်မီ။
စတော့အချက်ပြမှုဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏အစောပိုင်းဥပမာတွင်၊ သင်သည် ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုကို $205.00 ဖြင့် Disney တွင် အကြာကြီးသွားသင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် - ဤကုန်သွယ်မှုတွင် 203.00% ထက် မပိုစေရဟု သရုပ်ဖော်ပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာ $1 သို့ကျသည်နှင့်တပြိုင်နက် – ပွဲစားသည် သင့်အတွက် သင့်ရာထူးကို အလိုအလျောက်ပိတ်ပေးလိမ့်မည်။
စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုချင်းစီတွင်ကျွန်ုပ်တို့လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သည့်နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အမိန့်မှာအမြတ်အစွန်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါကမင်းရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုအလိုအလျောက်သော့ခတ်သွားစေတယ် အစောပိုင်းကဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Disney ကိုဒေါ်လာ ၂၁၄ ဒသမ ၀ ဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်ယူပြီးအမြတ်အစွန်းဈေးသတ်မှတ်ချက်ကို သတ်မှတ်၍ အကန့်အသတ်စျေးထက် ၄% သတ်မှတ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ သင်စာကိုဤအချက်အတိုင်းလိုက်နာပါကစတော့အိတ်ရောင်းဝယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းအတိုင်းသာသွားပါက ၄% အမြတ်ရရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ဤဈေးနှုန်းကိုရောက်ရှိပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အမြတ်ကို ၄% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ, ဤသင်၌စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အချိန်စရာမလိုဘဲဖြစ်ပါတယ်။
စတော့ရှယ်ယာ အချက်ပြမှုများ – Risk Vs Reward
ဤတွင်လေ့လာပါ2ကုန်သွယ်ရေး၌, ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းကျွမ်းကျင်သူလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည်စတော့ရှယ်ယာအချက်အလက်များဝေမျှသည့်အခါမည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်မဆိုအကျိုးအမြတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲသတိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဥပမာတွင်စွန့်စားမှုနှင့်ဆုကိုအချိုး ၁း၄ ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄% ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစုရှယ်ယာ ၁% ကိုစွန့်စားရန်ရှာဖွေနေသည်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်နားရန်ဆုံးရှုံးမှုအမှာစာသည် ၁% နှင့်အမြတ်အစွန်းသည် ၄% ဖြစ်သည်။ ငါတို့၏စတော့ရှယ်ယာအချက်အလက်များတွင် 1:4စွန့်စားမှု / အကျိုးအမြတ်အချိုးအစားကိုအများအားဖြင့်သုံးလေ့ရှိသည် - အရောင်းအဝယ်သုံးခုလျှင် ၁ ခုအောင်မြင်လျှင်ဆိုလိုသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိသည်။
အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာလက်မှတ်များ Telegram Group
အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြများကို Learn2Trade မှတဆင့်ထုတ်လွှတ်သည် အခမဲ့ forex အချက်ပြကြေးနန်း အုပ်စု. နာမည်ရှိသော်လည်း၊ စတော့ရှယ်ယာများအတွက် အခမဲ့ အချက်ပြမှုများအပြင် forex ထက် ကျော်လွန်၍ ရောင်းဝယ်နိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစားအားလုံးကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကို ပေးရသည့်အကြောင်းရင်းများကို အောက်တွင်ကြည့်ပါ-
စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံသော: လူသန်း 500 ကျော်သည် Telegram ကိုအသုံးပြုသည်။ မက်ဆေ့ဂျ်များကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် ကုဒ်ဝှက်ထားပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှုသည် စံပြအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုထက် နည်းသောချိတ်ဆက်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့်တိုင် ဒေတာမည်မျှနီးပါးမျှ လိုအပ်ပါသည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ: Cloud-based မက်ဆေ့ဂျ်များကို အသုံးပြုသူအားလုံးထံ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပေးပို့ပါသည်။ သင်ယူမှု2ကုန်သွယ်မှုစတော့အချက်ပြမှုကို သင်ဘယ်တော့မှလက်လွတ်မည်မဟုတ်ပါ။
အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု: Telegram ဝန်ဆောင်မှုသည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရမှာက အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပါ။
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ Learn2ကုန်သွယ်မှုစတော့အချက်ပြအဖွဲ့ဝင်များသည် မီဒီယာများ၊ မက်ဆေ့ချ်များမှတစ်ဆင့် အကြံဉာဏ်များကို ချတ်နိုင်ပြီး မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဒါက ညီညွတ်မှုနဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားချက်ကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်ပုံများ: ဤတွင်လေ့လာပါ2ကုန်သွယ်ရေး၌ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာအချက်အလက်များကိုအရံသိမ်းဆည်းလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Telegram အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဂရပ်များသို့မဟုတ်ဇယားများကိုမျှဝေလေ့ရှိသည်။
Telegram သည်အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားနိုင်အောင်လမ်းဖွင့်နေသည်။ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ Telegram ဟာအရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Learn2Trade စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြအဖွဲ့ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါသင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းနေသည် - ထိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်စတော့ဈေးကွက်များရှေ့တွင်ရပ်တည်။ တသမတ်တည်းအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်အပြန်အလှန်ဆန္ဒရှိသည်။
ဝန်ဆောင်မှုသည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင့်တွင် Learn2ကုန်သွယ်မှုစတော့အချက်ပြအချက်ပြတစ်ခုရှိသည်ကို သင်သိစေရန်အတွက် သင့်ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် အသိပေးချက်လေသံကို သင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် ၎င်းတို့၏ ဖုန်းကို တစ်နေ့တာလုံး အသံတိတ်နေခြင်းကို နှစ်ခြိုက်သူဖြစ်လျှင်ပင် အက်ပ်က သင့်အား Telegram မက်ဆေ့ချ်များ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သတိပေးနိုင်စေရန် ၎င်းအား သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး Stocks Signals အစီအစဉ်
ဤတွင် Learn2Trade ၌ကျွန်ုပ်တို့စတော့ဈေးကွက်သို့အားတက်သရောနှင့်ပြင်းထန်သောသုတေသနပြုသည်။ ဤသုတေသနသည်ဇယားပုံဆွဲခြင်း၊ အဆင့်မြင့်ညွှန်ပြကိရိယာများနှင့်စတော့နောက်ကွယ်ရှိကုမ္ပဏီများ၏ဘဏ္dataာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်နက်နက်နဲနဲသုတေသနပြုခြင်းများပါ ၀ င်သောအသေးစိတ်ကျသောနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များအား အလုံးစုံပြည့်စုံသောစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုအစီအစဉ်ကို ပေးဆောင်ရန် အဆုံးမဲ့နာရီများကို မြင်ကွင်းနောက်ကွယ်တွင် ကုန်ဆုံးစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေးကို ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်အား တစ်နေ့လျှင် အချက်ပြမှုများ ဒါဇင်များစွာဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးနေမည့်အစား - ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ပတ်လျှင် အကြံပြုချက်3ခု ထုတ်ပေးသည် -2Trade Telegram ကိုလေ့လာပါ။ အုပ်စုတစု။
တစ်ပတ် သို့မဟုတ် နှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်တွင် သင်သည် စတော့အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကို မကျေမနပ်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေပါက၊ ၎င်းသည် ပြဿနာရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးကို အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချသောကြောင့် အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို ရက် 30 ငွေပြန်အမ်းပေးသည့်အာမခံချက်ပေးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း နုတ်ထွက်လိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ပြန်အမ်းငွေ တောင်းဆိုရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည် ပံ့ပိုးကူညီရေး အဖွဲ့ထံ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သရုပ်ပြအကောင့်ဖြင့် ကျော်ကြားသော အွန်လိုင်းစတော့ပွဲစားထံသွားပြီး အကောင့်ဖွင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ eToro - ပွဲစားသည် ကော်မရှင်ခအခမဲ့ဖြစ်သောကြောင့် သုံးစွဲသူပေါင်း 17 သန်းကျော်ကို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး စက္ကူရန်ပုံငွေတွင် $100,000 ဖြင့် အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
သင်ယူမှု2ကုန်သွယ်မှုစတော့အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိသောအခါတွင်၊ ကွေးနနျးစာ - သင်၏ eToro သရုပ်ပြအကောင့်မှတစ်ဆင့် စာကိုအမှာစာအတိုင်း လိုက်နာပါ။
သင်၏ရာထူးကိုပိတ်သောအခါ - အမြတ် / ဆုံးရှုံးမှုကိုသတိပြုပါ။
အချက်ပြမှုများကို လိုက်နာပါ၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပြန်လုပ်ပါ- အနည်းဆုံး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာပါ။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုများသည် မည်မျှအောင်မြင်သည်ကိုကြည့်ရန် အမြတ်အစွန်းများနှင့် အမြတ်များကို တွက်ချက်နိုင်သည်။
အားလုံးထက် - ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်မှတစ်ဆင့် စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို ခံစားရနိုင်ပြီး ၎င်းသည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကုန်သွယ်မှုပုံစံနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စိတ်ကူးကို သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ရက်ပေါင်း 30 ပြန်ငွေအာမခံချက်ကိုကမ်းလှမ်းဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်, သရုပ်ပြအကောင့်စက်ရုံမှတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခြင်းဖြင့်သင်အမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိပါ။
ဒီနေရာမှာလေ့လာပါ ၂ ကုန်သွယ်ရေးမှာငါတို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်ကြီးမားသောအခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံမရှိပါ။
တစ်လလျှင်ပေါင် ၁၅ ပေါင်သာပေးဆောင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အပတ်တိုင်းသင့်အားစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြ ၃ ချက်ပေးပို့ပါမည်။ ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါကရက်ပေါင်း ၃၀ ငွေပြန်ပေးဖို့အာမခံချက်လည်းပါပါတယ်။
Best Stock Signal အတွက်ပွဲစားရွေးချယ်ခြင်း
အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများအတွက် ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းကို ပေါ့ပေါ့ဆဆမထားသင့်ပါ။ ထို့ကြောင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အဓိကကျသော မက်ထရစ်များစာရင်းကို အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ကအကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများအတွက်ပွဲစားရွေးချယ်ရာတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတက်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရိပ်ပေးတဲ့ပံ့ပိုးသူတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ သင်သည်သူတို့၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာ ၀ န်ယူခြင်းမရှိသောကုမ္ပဏီများသို့သင်ငွေလွှဲပြောင်းပေးနေသည်ဟူသောအချက်ကိုမပြောပါနှင့်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလေးစားရဆုံးဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်အချို့သည် စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်း eToro ကို ထိန်းညှိပေးသည် - အပါအဝင် FCA (ယူကေ)၊ ASIC၊(သြစတေးလျ)နှင့် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်)။ သတိမထားမိသူများအတွက်၊ ထိန်းညှိထားသော စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်းများသည် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေခွဲခြားခြင်း၊ အခကြေးငွေပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ KYC နှင့် အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရပါမည်။ ထို့ကြောင့်၊ eToro ကဲ့သို့သော ထိန်းညှိပွဲစားများက သင့်အား ဘေးကင်းရေးပိုက်ကွန်တစ်ခု ပေးဆောင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စတော့အချက်ပြမှုများသည် ရေတိုကုန်သွယ်မှုနှင့် ကျိုးနွံသောအမြတ်အစွန်းများရယူခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သည် - ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် သင့်အား တင်းကျပ်စွာ ပေးဆောင်နိုင်သော အွန်လိုင်းစတော့ပွဲစားတစ်ဦးကို ရှာဖွေသင့်သည်။ န့် နှင့် ကုန်သွယ်မှုအတွက် ကော်မရှင်နှုန်းထားများ နည်းပါးသည်။
အကယ်၍ သင့်အတွက် စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးပွဲစားဖြစ်နိုင်သည်များကို ဂျူရီလူကြီးမှ ဆက်လက်ဆုံးဖြတ်ထားပါက eToro သည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်ကို သင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ပွဲစားသည် အပြည့်အဝလိုင်စင်ရထားပြီး စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ နှင့် – လူမှုကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းသည် ကော်မရှင်ခတစ်ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်စရာမလိုဘဲ စတော့ရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်နိုင်စေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်စဉ်းစားရမည့် တစ်ခုတည်းသောအခကြေးငွေမှာ ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်ဘတ်ဂျက်သည် သင်နှစ်သက်သလောက် အထင်ကြီးစရာမဟုတ်ပါက စိတ်မပူပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်အများအပြားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့အချက်ပြမှုများကိုအသုံးပြုကာ ၎င်းတို့၏ရာထူးများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် အွန်လိုင်းပွဲစားမှတစ်ဆင့် သြဇာအာဏာကိုအသုံးပြုကြသည်။
ထိပ်တန်းပွဲစား eToro သည် UK သို့မဟုတ် Europe တွင် အခြေစိုက်ပါက 1:5 အထိ စတော့အရောင်းအ၀ယ်တွင် သြဇာအာဏာ ပေးပါသည်။ တခြားနေရာမှာ အခြေစိုက်ထားရင် 1:20 အထိ ရနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်သင်၏ရောင်းဝယ်မှုသည်သာမကသင်နေထိုင်သောနေရာပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ အချို့သောလူမျိုးစုများသည်ပွဲစားတစ် ဦး ပေးနိုင်သည့်သြဇာပမာဏကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အချို့ကမူသူတို့ဆန္ဒရှိသလောက်ရယူနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုက သင့်အား ပေးဆောင်နိုင်သည့် စျေးကွက်များကို အပြည့်အဝ သိရှိကြောင်း အမြဲသေချာပါစေ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်သည် UK စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုတွင် အော်ဒါတင်ရန် အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိပါက - ပွဲစားမှ ဤစျေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို သေချာစေရန်လိုအပ်ပါသည်။ မဟုတ်ပါက၊ ၎င်းသည် အလဟသဖြစ်သော စတော့အချက်ပြအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် eToro သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်အမျိုးမျိုးမှကွဲပြားခြားနားသောစတော့ရှယ်ယာ ၂,၄၀၀+ ကိုရယူနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ငါတို့၏စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများတွင် featured စတော့ရှယ်ယာတစ် ဦး မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ဤအွန်လိုင်းပွဲစားများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုအလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် နောက်ထပ်မက်ထရစ်တစ်ခုမှာ စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်းသည် ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများစွာကို လက်ခံခြင်းရှိ၊ အချို့သော ရိုးရာအွန်လိုင်းပွဲစားများသည် ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့် ဖောက်သည်များကိုသာ ငွေသွင်းခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် သင်၏စတော့အချက်ပြခရီးကို တစ်ပတ်အထိ နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
eToro သည် ခရက်ဒစ်နှင့် ဒက်ဘစ်ကတ်များမှ ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများအထိ နှင့် e-wallets ကဲ့သို့သော အရာအားလုံးကို လက်ခံပါသည်။ PayPal က, Skrill, Neteller, နှင့် ပို. သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာနိမိတ်လက္ခဏာများကိုအသုံးပြုနည်း - တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လျှောက်လှမ်းခြင်း
အခုအချိန်မှာတော့ သင်ဟာ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ယုံကြည်မှုကို ခံစားလာရပါပြီ။ သင့်အား လမ်းပြရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုပါ။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာတွင် Learn5Trade တွင်အကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဆင့် ၅ ဆင့်ဖြင့်လေ့လာသည်။
အဆင့် ၁: သင်ကြားမှု 1 ကုန်သွယ်ရေးသို့ဆက်သွယ်ပါ
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Learn2Trade နဲ့ စာရင်းသွင်းပါ။ ဤသည်မှာ ဘောလုံးလှိမ့်ရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြ Telegram အဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် - သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လစဉ်ကြေး £15 ကိုပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မမေ့ပါနှင့်၊ ၎င်းသည် ရက် 30 ငွေပြန်အမ်းပေးမည့် အာမခံချက်ပါရှိသည် - မေးခွန်းများမမေးပါ။
အဆင့် ၂ - ကျွန်ုပ်တို့၏ Signals Telegram Group သို့ဆက်သွယ်ပါ
ပြီးနောက်၊ သင်သည် တစ်ပတ်လျှင် အရောင်းအ၀ယ်အကြံပြုချက်3ခုကို စတင်လက်ခံရန် ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့အချက်ပြမှုများ Telegram အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှာ Telegram ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည် (သင်မရှိသေးပါက)။ ထို့နောက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် နည်းလမ်းအပြည့်အစုံကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၃: Custom Alerts ကိုဖွင့်ပါ
အစောပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်သည် သင်၏ Telegram အသိပေးချက်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အသိပေးချက်မက်ဆေ့ချ်များကို ကျယ်လောင်စွာဖွင့်ထားကြောင်း သေချာစေခြင်းသည် ပညာရှိရာရောက်ပါသည်။ သို့မှသာ သင်သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စတော့အချက်ပြမှုကို ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည်ဤအရာကို Learn2Trade Telegram အုပ်စုတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအချက်သည်တိကျသောအကြောင်းကြားစာအသံထွက်သောအခါသင်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့်စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြတစ်ခုကိုသင်ရရှိသည်ကိုသေချာစေသည်။
အဆင့် 4- စတော့ခ်အချက်ပြမှုများကို လက်ခံပြီး အမှာစာများထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Telegram မက်ဆေ့ချ်များသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရောက်ရှိလာပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စတော့ခ်အချက်ပြမှုများကို ပေးပို့သည့်အခါ – အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော အခွင့်အလမ်းဆီသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားချက်များ ရရှိပါမည်။
ထပ်မံပြောဆိုရန်, စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများအားလုံးစတော့ရှယ်ယာ၏အမည်နှင့်ရှည်လျားသောသို့မဟုတ်တိုတောင်းသွားပါရှိမရှိထည့်သွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကန့်အသတ်၊ ရပ်တန့်ပြီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အမြတ်အစွန်းရသောစျေးနှုန်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
အဆင့် 5: စတော့ရှယ်ယာပြန်လည်သုံးသပ်
ပြန်လည်နေရာချထားရန်ရာထူးနေရာချထားပြီးသောအခါသင်၏ stop-loss နှင့် take-profit အော်ဒါများသည်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းသို့ရောက်ရှိပါကအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင် Learn2Trade တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းစတော့စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့သည် အချက်ပြမှုတိုင်းတွင် အဝင်နှင့်အထွက်ဗျူဟာနှစ်ခုစလုံးကို အမြဲထည့်သွင်းပါသည်။ ၎င်းတွင် ဝယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေ စတော့၏အမည်၊ ကန့်သတ်စျေးနှုန်း၊ ရပ်တန့်ခြင်းအရှုံးနှင့် အမြတ်ယူသည့်စျေးနှုန်းများ ပါဝင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသောစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများကို သင်မကြိုက်ပါက၊ သင်၏ရက် 30 ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံချက်တွင် သင်အမြဲတမ်းပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်သည်။ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ပြန်အမ်းငွေအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ကူညီရေးအသင်းသို့ ရိုးရှင်းစွာ ဆက်သွယ်ပါ။
ဤတွင် Learn2Trade ၌ကျွန်ုပ်တို့ Telegram အုပ်စုဝင်များသို့တစ်ပတ်လျှင်စတော့ရှယ်ယာအရည်အသွေးသုံးခုပေးပို့သည်။ ဒီဟာလစဉ်ကြေး£3လောက်ကျသင့်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာရန်2ကုန်သွယ်ရေးစတော့ရှယ်ယာအချက်ပြတစ်ခုစီတွင်သင်၏မှာကြားမှု၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးပါဝင်သည် ဥပမာအားဖြင့်၊ အချက်ပြမှုကမည်သည့်စတော့ရှယ်ယာကိုရောင်းမည်၊ ဘယ်လောက်ရှည်မည်၊ တိုမည်၊ မည်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်ရပ်နားရန်အရှုံးနှင့်အမြတ်ယူရန်အမိန့်ကို ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်။ eToro ကဲ့သို့သောဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသောစတော့ပွဲစားသို့သာသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်များကိုသာရောင်းပါ။ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း eToro သည်သင်၏ကန့်သတ်ချက်၊ ရပ်တန့်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းအမိန့်များကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာအချက်ပြမှုများသည်စျေးကွက်နှင့်အချိန်ကုန်ခံမှုကိုလက်ဖြင့်နီးကပ်စွာထားရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အနိုင်ရရှိသောအချက်ပြမှုတိုင်းကိုအာမခံလိုသော်လည်း၎င်းသည်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုသည်မည်သို့မည်ပုံအလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်ပါ။ ကြည်လင်တဲ့ဘောလုံးမရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့်နက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောအချက်ပြမှုများကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်း ၀ င်အသစ်များအားရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းနိုင်သည့်အာမခံချက်ကိုပေးသည်။